Digital Forensics Quizs (26-30) #Question Hash function ဆိုတာ ဘာလဲ ? #Answer Hash ဆိုတာ fixed-length digit (one-way function) ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲတဲ့ hash အပေါ်မူတည်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ ဂဏန်း အရေအတွက် ရှိပါတယ်။ Evidences တစ်ခုကို အချက်အလက်တစ်ခု ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ Hash မှာ ပါတဲ့ ကိန်းဂဏန်း အချို့ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Folder တစ်ခုထဲမှာ File အရေအတွက်5ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ အဲဒီ Folder ရဲ့ Hash (မူရင်း) ကိန်းဂဏန်းက တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Folder ထဲကနေ မသမာသော နည်းနဲ့ File တစ်ခုခုကို ဖျက်လိုက်ရင် သော်လည်းကောင်း ပြောင်းလဲလိုက်ရင်သော်လည်းကောင်း Folder ရဲ့ Hash (မူရင်း) ကိန်းဂဏန်းက အချို့ပြောင်းလဲ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲတဲ့ Forensics Tools အပေါ်မူတည်ပြီး MD5, SHA2 , SHA2 အဆင်ပြေရာကို Analysis လုပ်သူက ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ #Question Imaging နဲ့ Cloning ရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်က ဘာလဲ ? #Answer Imaging ပြုလုပ်တာကို Bit by bit copying (သို့မဟုတ်) Forensicsally Sound ပြုလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ Storage Media ကို တူညီတဲ့ နောက်ထက် Storgae Media တစ်ခုအပေါ်ကူးယူတာကို Cloning ပြုလုပ်တယ်လို့ခေ
Digital Forensic Quizs (6-25) India t Information Technology Act, 2000 (ITA 2008) , Indian Penal Code (IPC), Indian Evidence Act (IEA) ပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ပြုလုပ်ထားသော အမေး အဖြေများ ဖြစ်ပါသည်။ #Question Digital Forensics Professional တစ်ယောက်က Cyber Law ကိုသိသင့်ပါသလား ? သိသင့်တယ်ဆိုရင် ဘာလို့သိသင့်တာလဲ ? #Answer မေးခွန်းကိုဖြေမယ်ဆိုရင် သိသင့်သလို မသိရင်လဲ ရတယ်လို ဖြေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိသင့်တယ်ဆိုတာကို နည်းနည်းဇောင်းပေးပြီး ပြောပါရစေ။ Digital forensics ဆိုတာက techno-legal field ဖြစ်တာကြောင့် Forensics Report ကိုရေးသားပြင်ဆင်သူက တရားရုံးမှာ သက်သေထွက်ဆိုရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် Cyber Law ကိုသိရပါမယ်။ Digital Forensics Professional တစ်ယောက်က Law ကို လုံးဝမသိဘူးဆိုတာမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အခြားသော ဥပဒေတွေထဲကမှ Cyber Law ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သိသင့်ပါတယ်။ Digital Forensics Professional တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့တာဝန် အလုပ်နဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေကို သိသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အစိုးရဘက်မှာ Investigation လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Law ကို သိထားခြင်းဖြင့် ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ Digital
TikTok Law Enforcement Guidelines Update တောင်းဆိုနိုင်သော အချက်များ Detail Link TikTok Law Enforcement Guidelines
Digital Forensics Quizs (1-5) Digital Forensics (1-100) အမေးအဖြေ အချို့သည် India ရာဇသတ်ကြီး၊ သက်သေခံဥပဒေ၊ India နှင့် Global အခြေအနေဖြင့် မေးမြန်းဖြေဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများကို ပုံတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ #Question Digital Forensics Professional တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ Field ကိုဝင်ရောက်ဖို့ Bachelor Or Master ဘွဲ့တွေလိုအပ်ပါသလား ? #Answer ဒီအမေးကိုဖြေရမယ်ဆိုရင် မလိုအပ်ပါဘူးလို့ပဲ ဖြေပါရစေ။ Digital Forensics မှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေများစွာလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘွဲ့ မရတဲ့သူတွေက Professional မဖြစ်နိုင်ဘူး ဒီ Field ကို မဝင်ရောက်နိုင်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အလုပ်တစ်ခုအတွက် ဘွဲ့ဆိုတာ Gate Pass တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bachelor Or Master တွေရရှိထားပေမဲ့ Professional လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။ Digital Forensics Field ကိုဝင်ရောက်ဖို့ Professional Cerifitcation တွေ Course တွေ ဒီအချိန်မှာ ရှိနေပါပြီ။ Digital Forensics Filed ကိုဝင်ရောက်ဖို့ဆိုရင် နည်းပညာကိုဝါသနာပါမှုနဲ့ Analysis Skill ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်အနေနဲ့ ပြောရရင် First Responder, Lab Assistant လိုနေရာမျိုးတွေက Analysis Skill ရှိဖို့
နယူးဒေလီ India National Cyber Forensics laboratory ၏ ခေါင်းဆောင် Mr. Khadsare နှင့် ForensicsFocous အင်တာဗျူး
3-3-2021 နယူးဒေလီ India National Cyber Forensics laboratory ၏ ခေါင်းဆောင် Mr. Khadsare နှင့် ForensicsFocous အင်တာဗျူး Question Mr. Khadsare အနေနဲ့ Cyber Security နဲ့ Digital Forensics မှာ နှစ်ပေါင်း 20 လောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီလမ်းကြောင်းကို ဘယ်လိုရောက်ရှိလာပါသလဲ ? India နိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီအပိုင်းတွေမှာ တိုးတက်လာမှုအပေါ်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ ? Answer 1999 မှာ Pune University ကနေ electronics and telecommunication engineer ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ communications , networking. အပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ investigation အပိုင်းမှာ စိတ်ပါဝင်စားတာကြောင့် Pune University မှာ ဖွင့်လှစ်တဲ့ Asian School of Cyber Laws ကနေ Crime Investigation Course ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Course ကနေ စတင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ Forensics အပိုင်းကိုပဲဇောက်ချလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Digital Forensics နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Course တွေ 15 ခုလောက်ပြီးတဲ့ အခါမှာ တစ်ကယ့် Case တွေကို လုပ်ကိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ digital forensics professional တစ်ယောက်အတွက် လက်တွေ့ပိုင်းက အလွန်ပင်အရေးကြီးပါတယ်။ technology